अल्डरसटमा ‘ब्लाइन्ड रक्स’को पहिलो प्रिमियर शो
अल्डरसट । दृष्टिविहीन सृष्टि केसीको कथामा निर्माण भएको नेपाली चलचित्र ‘ब्लाइन्ड रक्स’को अल्डरसटस्थित प्रिन्सेस हलमा रेडकार्पेटसहित पहिलो प्रिमियर शो सम्पन्न भएको छ ।
बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीको प्रमुख आतिथ्य र स्वयं सृष्टि केसीको विशेष आतिथ्यमा गत शनिबार प्रदर्शन भएको चलचित्रमा दृष्टिविहीन केसीले संघर्ष र सहासलाई पर्दामा उतार्न निर्देशक मिलन चाम्स सफल देखिएका छन् ।
पढाईभन्दा नृत्यमा बढी चासो राख्ने सृष्टिको सानैदेखि आँखा कमजोर हुन्छ । आँखा परीक्षणकै क्रममा चिकित्सकको लापरबाहीका कारण सृष्टिले आँखाको ज्योति गुमाउन पुगिन् । घर परिवारले उपचारका लागि कुनै पनि कसुर बाँकी राख्दैनन् । अत्यन्त मिलनसार साथीहरु पनि टाढिन पुग्छन् । कलेज भर्ना हुन पनि निकै संघर्ष गर्नुपर्छ । त्यस्ता अपहेलना र व्यवधानहरुलाई चिर्दै सृष्टि अगाडि बढ्दै जान्छे । उनले दृष्टिविहीनहरुको हक अधिकारका लागि ‘ब्लाइन्ड रक्स’ नामक संस्था स्थापना गर्छिन् । सबैको प्रेरणाको स्रोत बन्न सफल हुन्छिन् । चलचित्र ‘ब्लाइन्ड रक्स’मा देखिएका दृश्यहरु सृष्टि केसीको वास्तविक जीवनमा बनेको (बायोपिक) चलचित्र हो । सो चलचित्र हेरेर आँखा नरसाउने दर्शकको संख्या कमै थियो । सृष्टि दृष्टिविहीनहरुको मात्र होइन, दृष्टि भएकाहरुको पनि प्रेरणाको स्रोत बन्न सफल भएको दर्शकहरुको भनाइ थियो ।
निर्माता निकेश लिम्बूको सपना, निर्देशक मिलन चाम्सको मेहनतले बनेको चलचित्र प्रदर्शनको क्रममा सृष्टि केसीले ‘आजबाट सृष्टिले दृष्टि पाउने छिन्, उनको सपनामा हजारौं आँखा थपिए’ भन्दै चलचित्र हेरेपछि दृष्टिविहीन र अपाङ्गता भएकाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । सोही अवसरमा नेपाली राजदूत डा. सुवेदीले सृष्टि सिर्जना, संभावना र सफलताको प्रतीक भएको बताए ।
सृष्टि केसीकी आमा परमेश्वरी केसीको समेत विशेष उपस्थिति रहेको प्रदर्शनमा सृष्टि केसीलगायत चलचित्रलाई सहयोग गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरुलाई सम्मान गरिएको थियो भने वरिष्ठ सञ्चारकर्मी खगेन्द्र नेपालीलाई अभिनन्दन गरिएको थियो ।
निर्माता लिम्बू र निर्देशक मिलन चाम्सले बायोपिक चलचित्र व्यावसायिक चलचित्रको तुलनामा त्यति मुनाफा कमाउन सफल हुँदैनन्, तापनि आफूहरुले समाजलाई केही नयाँ सन्देश दिनका लागि जोखिम उठाइएको बताउँदै सबैलाई धन्यवाद दिए ।
निर्देशक चाम्सले हँसिया, वीरविक्रमजस्ता सफल व्यावसायिक चलचित्र निर्देशन गरिसकेका छन् भने निकेश लिम्बूले हँसिया र रातोघरको निर्माणमा अनुभव बटुलिसकेका छन् ।
नायिका वेनिशा हमालले सृष्टि केसीको जोडदार अभिनय गरेकी छन् । त्यस्तै, गौरी मल्ल, अर्पण थापा, नाजिर हुसेन र बैंकर अनिल शाहले पनि कथाले मागेअनुसार राम्रो अभिनय गरेका छन् । नवराज कृष्ण थापाको छायांकन रहेको चलचित्रमा ताराप्रकाश लिम्बू, हरि लम्साल र कल्याण सिंहको संगीत रहेको छ । चलचित्रलाई यम थापा र सुमन उप्रेतीले लेखेका हुन् ।
बेलायतमा रहेका चलचित्रप्रेमीहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको प्रदर्शनमा सृष्टि केसीले स्वागत मन्तव्य प्रकट गरेकी थिइन् भने वरिष्ठ सञ्चारकर्मी नरेश भट्टराईले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।